'' Muranki Halkaa Haku Dhamaaddo ''.
Sunday June 28, 2020 - 19:26:35 in Articles by Hadhwanaag News
Dad badan ayaa dood geliya meeqaamkii Somaliland ee 1960 iyagoo ku dooda in xoriyaddii 1960 ay qaateen Goboladdii Waqooyi , qaar baa muska isku qaada oo yidhaahda calankeebaa Hargaysa lagga taagey , doodo badan oo mukur u badan baa marar badan lasoo dhigaa , hassa yeeshee waxaas oo dhan waxaa soo afjarey heshiiskii Somaliland iyo Great Britain ku kala tageen , Somaliland xoriyadda ku qaadatay oo ah kan imika idiin muuqda .
Sidda ku xusan qodobadda heshiiskana waxaa soo afjarmay 26-june 1960 heshiiskii u yaalay somaliland iyo Uk ee ilaaladda , waxaanay noqotay Somaliland 26-june sidda heshiiskan ku xusan wadan madaxbanaan .
Hadaba waxaa is waydiinle , Heshiiskan Somaliya ma ku xusan tahay , jawaabtu waa maya .
Hadii somaliland gobolo waqooyi ahayd , maxaa heshiiska loogu qori waayay in Somalia ingiriisku ku wareejiyo Somailand sidii Hongkon1997 .
Heshiiskan waxaa kala saxeexday madaxdii Somaliand oo uu hogaaminayo M I Cigaal iyo dawladda Ingiriiska , maxaa uu saxeexi waayay Madaxwaynihii Somaliya ee waagaas Cabdilaahi Ciise .
Waxba yaan hadal idinku daaline murankaas oo dhami halkanuu kusoo af goay , somaliland ikhtiyaarkeedda ayay kula midowday somaaliya markay xorowday , imikana ikhtiyaarkeedda ayay kagga soo noqotay , sidda maraboobta Mogdisho ay isaga furfuraysaana waa shaqo u taala , waayo Ereteriya oo sidda Somaliland Itoobiya gacanta ugu gashayba Adis ababa iyadaa iska furfurtay .